कात्तिक ४, काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनी र सेञ्चुरी बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।
मञ्जुश्री फाइनान्सले असोज २१ गते र सेञ्चुरी बैंकले असोज २२ गते ऋणपत्र निष्कासन गर्नको लागि बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् ।
मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनीले रू. ५० करोड बरावरको ५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्नको लागि निवेदन दिएको हो । कम्पनीले ५ लाख कित्तामध्ये २ लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि र ३ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत तवरबाट संघ संस्थालाई विक्री गर्नेछ ।
कम्पनीले ९ दशमलव ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ८ वर्ष सम्मको लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न निवेदन दिएको हो । विक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
त्यसैगरी सेञ्चुरी बैंकले रू. २ अर्ब २० करोड बराबरको २२ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्नको लागि बोर्डमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीले २२ लाखमध्ये ८ लाख ८० हजार कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नेछ भने बाँकी १३ लाख २० हजार कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट विक्री गर्नेछ ।
विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्षसम्मको लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको हो । बोर्डबाट स्वीकृती पाएपछि ती दुबै कम्पनीले ऋणपत्र निष्कासन गर्र्नेछन् ।